NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 952
Sarimihetsika : mampahafantatra ny talentany ny Japoney
Par Taratra sur 11/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Mampahalala an’i Madagasikara, any ivelany any, indrindra any amin’ny fireneny, sady maneho ny talentany eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika ry zareo Japoney. Vao mainka manamafy ny fifanakalozana ara-kolontsaina eo amin’ny tany roa tonta ny ambasadaoro vaovao sy ny ekipany. Porofon’izany, hitohy ny « Focus cinéma Japon », hetsika iray hanasongadinana ny vokatra sarimihetsika japoney. Hotanterahina ny 26 hatramin’ny […]
Fandaharana « Mbarakaly » : nodimandry i Abel Rakotozanany
Misy ireo malaza hita amin’ny fahitalavitra. Tsy mba isan’izany, saingy nanana anjara biriky teo amin’izay sehatra izay i Abel Rakotozanany. Fantatra fa nodimandry, omaly, rehefa avy nolazoin’ny aretina nandritra ny fotoana maharitra izy. Ny fandaharana “Mbarakaly” tao amin’ny fahitalavi-pirenena TVM no tena nahafantaran’ny maro an’i Abel Rakotozanany. Mpanatontosa ny fandaharana izy, ary teknisianina ihany koa. […]
Ambatondrazaka : manana vondrom-bavaka ny… polisim-pirenena
Par Taratra sur 11/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
« Matetika ny ratsy no hitan’ny olona ao amin’ny polisim-pirenena”, hoy ny Inspecteur principal Ralalasoa Monique, mpitarika ny vondrom-bavaka ao amin’ny minisiteran’ny Filaminana anatiny. Toy ny olon-drehetra ihany anefa ny polisy ary mivondrona anaty fikambanana. Manana vondrom-bavaka mihitsy ny polisim-pirenena izay tarihin’ity inspecteur ity. Tsy mbola manana “Aumonerie” ity departemanta. Efa 12 taona kosa no nijoroan’ny […]
Toe-draharaha politika : herin’ny mpitondra ny fiparitahan’ny mpanohitra
Par Taratra sur 11/08/2016 Divers, NS Malagasy
Misy ve ny mpanohitra: iza marina, aiza? Na ny samy mpanohitra, na izay heverina ho izany aza, tsy mitovy hevitra be ihany: samy mandeha, samy mitady sy miady izay ho azy. Latsaka anaty vela-pandriky ny mpitondra? Hatramin’izao, na misasaka aza ny fe-potoam-piasan’ny fitondrana: tsy misy mpanohitra eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Voarirarira lava teny ny […]
Hitaky ny tombontsoany ireo gadra politika
Par Taratra sur 11/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nilaza ny hanao fihaonambe ireo avy amin’ny gadra politika (Fedep) ato ho atao ka hilaza ny heviny momba ny raharaham-pirenena, indrindra ny fampihavanam-pirenena. Mialoha izany anefa, tsy ankasitrahan’izy ireo ny fifampitondrana mitanila sy ny tsy fifandanjana eto amin’ny firenena. Navoitran’ny mpitarika azy ireo, Rakotomalala Henri tamin’ny haino aman-jery, omaly fa tsy mba mahazo tambiny tahaka […]
Ilakaka : nohelohin’ny RSF ny sivana atao amin’ny radio Jupiter
Hatrany ifotony ny sakantsakana amin’ny fahalalahana sy fahafahana maneho hevitra. Nohitrikitrihin’ny Reporters sans frontières (RSF) tamin’ny alalan’ny fanambarany, omaly, ny tsy fanekena ny antsojay atao amin’ny onjampeo Jupiter any Ilakaka. « Tsy azo ekena velively ary helohinay ny fanaovana sivana amin’ny radio tsy miankina ataon’ny orinasa misahana herinaratra any Ilakaka, miainga amin’ny baikon’ny mpitondra any […]
Zaka tsara : fitondrana manao izay saim-pantany
Ahoana ihany izy ity? Ny raharaham-pirenena, ny fiainam-bahoaka… Tsy hita be ihany. Mafanafana ratsy toa hisy inona iny; avy eo, mangina… Mandra-pahoviana? Mandeha ihany ny fotoana. Mifampiandry kendry tohina? Manao sy manohy ny ataony hatrany ny mpitondra: tsy fanarahan-dalàna, kiantranoantrano, tsy fangaraharana… Tsy ahoana na iza hitsikera? Resaka ihany ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara […]
Rasolo André : “Mila alamina ny disadisa politika sy sosialy etsy sy eroa”
Mby aiza ny toe-draharaham-pirenena? Maneho ny heviny ny mpampianatra sôsiôlôjia politika eny amin’ny oniversite, Rasolo André: “Ndao halamina ny disadisa ara-politika sy ara-tsosialy, izay miteraka vanja miotrika etsy sy eroa.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao? Rasolo André (-): Mahasanganehana ny mijery ny famindran’ny firenentsika. Mihazakazaka mamboly fihavanana […]
Maka Alphonse : “Maika ny fandaniana ny lalàn’ny FFM vaovao”
“Tokony hasiana fivoriana tsy ara-potoana hataon’ny Antenimiera roa tonta ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fampihavanana sy ny volavolan-dalàna momba ny fitsarana manokana misahana ny heloka ara-toekarena, vola, hetra.” Io ny nambaran’ny mpitondra tenin’ny Filankevitry ny fampihavanana malagasy (FFM) sady ao amin’ny komitin’ny manampahaizana momba ny fampihavanana, Maka Alphonse, teny Ampefiloha, afakomaly. Raha miandry ny […]
Andaniana 300 000 Ar ny fampidirana zaza iray
Manomboka ny fandraisana fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana vaovao 2016-2017 amin’izao fotoana izao, ho an’ny sekoly tsy miankina. Natokana ho an’ireo mpianatra vaovao nanao fifaninanana hidirana amin’ny kilasy izany, fa ireo tsy niova sekoly efa nosantarina ny volana jolay ny famandrihan-toerana. Ho an’ireo ray aman-dreny izay tsy nahatafiditra ny zanany teny amin’ny sekolim-panjakana ho an’ny […]
Par Taratra sur 11/08/2016 En Bref, NS Malagasy
Hiaraka hivory amin’ny eo anivon’ny fitantanan-draharaham-panjakana ny Cenit, anio tolakandro eny amin’ny foibeny eny Alarobia. Tafiditra amin’ny dinika efa natao niarahana amin’ireo mpisehatra rehetra momba ny fifidianana izao hetsika ataon’ity rafitra mpikarakara ny fifidianana ity izao. Hanehoana koa fa miasa izy ireo na tsy ao anatin’ny fotoana fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana aza izao. Hanazava […]
Saribao : tsy nidina intsony ny vidiny
Na efa maina aza ny andro, tsy tafaverina tamin’ny vidiny hatramin’izay, manodidina ny 15.000 Ar ny vidin’ny saribao iray gony eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny eny Andravoahangy, Mahavoky, Besarety, 22.000 Ar hatramin’ny 25.000 Ar ny vidiny. Mbola 25.000 Ar kosa ny eny Analamahitsy sy Amboditsiry. Nanomboka ny volana jona ny fisondrotan’ny vidin-tsaribao teto […]
630 fara-faha-betsany ireo mpianatra nangataka hiditra taona fahafolo ao amin’ny Lycée Rabearivelo Analakely amin’ity taom-pianarana ity. Nambaran’ny provizera Razafindrakoto Herizo fa ho 50 fara-faha-betsany ireo mpianatra isaky ny kilasy amin’ireo kilasy 12 hita ao amin’ity sekoly ity. Araka izany, ireo mpianatra nahazo salan’isa ambony tamin’ny fanadinana BEPC farany teo no horaisina. Efa nihatra hatramin’ny taon-dasa […]
Faritra Anosy sy Androy : ezahina ny hisarihana ireo orinasa indostrialy
Par Taratra sur 11/08/2016 Economie, NS Malagasy
Ezahina ny hisarihana ireo orinasa madinika sy salantsalany miasa amina sehatra indostrialy any amin’ny faritra Androy sy Anosy. Ankoatra ny harena an-kibon’ny tany izay efa ahitana ny QMM, ao ireo harena isan-karazany any amin’ireo faritra ireo, anisan’izany ny fambolena, fiompiana, harena anaty ranomasina. Ireo rehetra ireo, hanentanan’ny tale iraisam-paritra momba ny indostria, Randrianambinina Célestin Emmanuel, […]
Soamahamanina : « Handoto ny renirano ny fitrandrahan’ny Sinoa »
Ho an’ny fikambanana Collectif Tany, hanapotika ny reniranon’Ikalariana ny fitrandrahana volamena ataon’ny Sinoa any Soamahamanina. Hiantraika any amin’ny zavamananaina sy ny fahasalaman’ny mponina koa izany. Tsy nahafa-po ny fikambanana fiarahamonim-pirenena Collectif Tany ny valin-tenin’ny Ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana ONE sy ny fehin-kevitry ny vaomiera manokana (comité ad hoc) milaza fa « azo fehezina ny fiantraikany […]
Fitifirana zandary : sarona ireo fitaovam-piadiana
Taorian’ny famotorana nataon’ny zandary mikasika ny nitifiran’olona ny zandary GST Tovonirina Jean Ludivin, tany Antanimbary Marerano Manja, ny herinandro lasa teo, manatanteraka hetsika ny zandary avy any Manja. Tsy tratra tao amin’ilay fokontany intsony ireo dahalo fa ny trano voalaza fa nampiantrano azy ireo no nanaovana fisavana. Tratra tamin’izany ny basy FC Baikal calibre 12, […]
Jiolahy iray antsoina hoe Karana tratra teo am-pangalarana môtô iray teo amin’ny fiantsonan’ny fiarakodia eo amin’ny Lapan’ny Fitsarana, omaly tolakandro. Ny mpiambina ireo fiarakodia sy môtô teny an-toerana no nahatsikaritra ny fihetsik’ity jiolahy ity somary hafahafa ka nilaza tamin’ny tompony avy hatrany. Efa teo am-pamelomana ilay môtô mihitsy ity jiolahy ity no tratra. Nentina teny […]
Vonoan’olona tany Foulpointe : roa lahy voaheloka higadra an-terivozona 10 taona
Nomelohin’ny fitsarana higadra an-terivozona 10 taona avy i Moussa Donné sy i Tefy Jeannot nandritra ny fotoam-pitsarana momba ny raharaha ady heloka bevava. Naharitra ora maromaro ny fitsarana ity raharaha ity teny amin’ny fitsarana. Marihina fa ny 26 avrily 2015 alina no novonoin’izy roa lahy ireo tamin’ny fomba feno habibiana tao Antanimena Morarano Mahavelona Foulpointe […]
Zandary : hotohanan’ny Amerikanina
Nivoitra nandritra ny fihaonana teo amin’ny lehiben’ny sampam-piarovana eo anivon’ny masoivoho amerikana vaovao, Jason Neale sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg) fa hisy ny fanomezana fitaovam-pampianarana teny anglisy ho an’ny zandary. Hisy koa ny fampiofanana omen’ny masoivoho amerikanina ho an’ny zandarimariam-pirenena malagasy na eto an-toerana izany na any ivelany. Afakomaly no tonga nanatanteraka fitsidihana […]
Andravoahangy : saron’ny polisin’ny BC i Bera naman’i Fotsikely mpanao kidnapping
Raha efa nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny jiolahy raindahiny antsoina hoe i Fotsikely sy namany, saron’ny polisin’ny BC, sakelika fahefatra teny Andravoahangy ny asabotsy teo i Bera iray tarika amin’ireo jiolahy ireo… Albert Sylvain, 45 taona ny tena anaran’ity jiolahy saron’ny polisy ity. Araka ny fanazavan’ny polisy, izy no mpanome vaovao ireo mpaka an-keriny […]
Famonoana karana teny Mangasoavina : karohin’ny polisy ireo fiara P 405 sy 309 nampiasain’ireo jiolahy
Nandray an-tanana ny fikarohana avy hatrany ny polisin’ny BC Anosy, taorian’ny fitifirana ilay Karana antsoina hoe Hassan Farhane Houssenaly, 19 taona, teny Mangasoaviana tsy lavitra ny fiangonana Ekar, afakomaly hariva manodidina ny tamin’ny 7 ora sy sasany. Fantatra izao fa fiara Peugeot 405 miloko mavokely sy P.309 miloko manga ny fiara nentin’ireo jiolahy nanenjika ny […]
Ny sasany, miala sasatra…
Par Taratra sur 11/08/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Fotoam-pialan-tsasatra tokoa izao. Misy ireo efa lasa nialoha, namonjy ambanivohitra na morontsiraka, na any ivelany mihitsy. Arakaraka ny fahafahana rahateo io. Tototra sary avy any anaty fialan-tsasatra any ireo tranonkalan-tserasera, ifanakalozana amin’ny alalan’ny “internet”. Tena sahirana marina ve ny Malagasy? Raha ireny no tarafina, mampametraka izay fanontaniana izay tokoa. Fa tsy ampy hitarafana izay mitranga […]
Ambohimahitsy : kamiao tapaka hisatra nandona olona roa
Omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany, kamiao kely mpitaona biriky no tapaka hisitra, teny Ambohimahitsy, teo amin’ny Pk7+600. Araka ny fanazavana, nalefan’ilay mpamily tamin’ny sisin-dalana havanana ilay fiara teo amin’ny toerana atao hoe Ampasanirainivoalavo sangy tsy nijanona. Teo amin’ny vato maro milahadahatra amoron-dalana nadonan’ny mpamily vao tafajanona saingy nivadika. Olona roa teo […]
Par Taratra sur 11/08/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Hanao ahoana ihany ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena? Miantso ny vahoaka hidina an-dalambe eny amin’ny araben’ny Fahaleovantena ny Antso ho fanavotam-pirenena (AFP) amin’ny 19 aogositra. “Miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny AFP amin’ny 19 aogositra ho tonga marobe eny amin’ny kianja na ny araben’ny Fahaleovantena, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany, hanohizantsika ny tolona.” Fanambaran’ny […]
Resaky ny mpitsimpona akotry : samy olom-pirenena fa tsy mitovy lanja
Par Les Nouvelles sur 10/08/2016 Elucubrations, NS Malagasy
Tamin’iny andro nahafantarana ny fampidirana am-ponja vojimaika an’i Alain Ramaroson iny dia samy talanjona ny rehetra. Fantatra mantsy fa manahirana ny fanjakana izany fambaboana kalazalahy toy ity lehilahy ity. Vao mihaniitatra moa ny resaka raha samy naheno araky ny feo nandeha fa tsy nisitraka tombontsoa manokana ilay ingahirainy fa nasitrika miaraka amin’ny sarambaben’ny gadra ao […]
« Précédent 1 … 950 951 952 953 954 … 1 144 Suivant »